Qalinka Drive Recovery - Ladnaansho Faylal ay ka Pen Drive Effortlessly
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Pen Drive
Qalinka drive noo keeneysaa khatar lama filaan ah iyo sidoo kale sahlo weyn ku keenaa. Halkii lagu kaydiyo faylasha noo anfacaya ee computer ah, waxaan mar walba loo isticmaalo si ay u kaydi drive qalin. Gaar ahaan kuwa ganacsatada safarka, waa arrin run ahaantii hab ammaan ah oo ku habboon in ay xogta qaado. Si kastaba ha ahaatee, drives qalinka kale oo keentaa khasaaro xogta ay sabab u tahay qaar ka mid ah sababaha aan la garanayn ama la yaqaan.
Sababaha xogta drive qalinka badiyay:
1. Error: "Drive F The: aan la formatted, ma doonaysaa in ay haatan qaab?"
2. Formatting drive ama la tirtiro fayl iyo files shil
3. Awooda aan la saadaalin karin hoos marka aad furaysto ee computer
4. ma "saaraan hardware" kartaa in Windows
5. Weerar Virus
6. Inta badan isticmaalaan
7. Sababo aan la garanayn More
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada drive qalinka
Si aad u hesho dib aad xogta lumay drive qalin, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan drive qalinka software kabashada xogta . Waa mid aad u muhiim ah in aad doorato ammaan iyo xirfad drive qalinka qalab soo kabashada, sababta oo ah qaar ka mid ah barnaamijyada heerka hoose waxay wax u xogta aad lumay dheeraad ah. Halkan waxaan ku talinaynaa in si Khashuue ah Wondershare Data Recovery dadka isticmaala Windows, iyo Wondershare Data Recovery for Mac (la heli karo Mavericks).
Labada iyaga ka mid ah waa ay fududahay in la isticmaalo iyo in la siiyo hab gaar ah soo kabashada inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha tirtiray, formatted ama laga badiyay sababo kale oo si gooni gooni ah sida videos, photos, music, waraaqaha, emails, archive, iwm sokow drives qalinka la magac oo kala duwan, Wondershare Data Recovery (for Mac) taageertaa dib u soo kabashada ka kaydinta warbaahinta kala duwan sida drive dibadda adag, USB drive, camera digital, telefoonka gacanta, iPod, iyo in ka badan.
Hadda, aan ka soo dejisan ee software drive qalinka kabashada iyo qabtaan kabashada.
Kaliya 3 tallaabo inuu ka soo kabsado files ka drive qalinka
Tallaabada 1. Download oo ay maamulaan version saxda ah ee soo kabashada xogta on your computer oo waxaad heli doontaa interface ee aasaasiga ah sida dabagal (isku dayi halkan version Windows ah), ka dibna geli qalinka la wado galay PC ee.
Tag "Next" iyo dooran nooca file in aad rabto in aad ka soo kabsado wadid aad qalinka.
Tallaabada 2. Dooro wadid aad qalinka ku iskaan xogta lumay (External qalabka saari karo).
Tallaabada 3. eegis iyo hubi faylasha aad la doonayo oo guji inuu ka soo kabsado.
Marka lagu badbaadinayo xogta soo kabsaday, ka fiirsaneysa inay u badbaado, fadlan dooro meel kale, sida drive computer adag ama qalab kale oo dibadda ah, laakiin ma drive qalinka meesha aad ka soo kabanaya files hadda.
Video tutorial soo kabashada xogta drive qalinka
Waa maxay sababta kabashada drive qalinka suurto gal ah?
Haa! Waxaad kartaa kabsado xogta ka drive qalinka si fudud. Sida xaqiiqadu, files lumay weli waa meel ku wadid aad qalin laakiin geli karin, iyadoo aan loo eegayn in aad tirtirto, qaab ama iyaga laga badiyay sababo kale. Lagu calaameeyey karo, meel la degan files lumay sheegayaa nidaamka in ay ka waxaa la samayn karaa isticmaalka si loo badbaadiyo macluumaadka cusub. Sidaa darteed, haddii aad soo qoray uma aan xogta cusub waxa ku jira, waxa aad awoodi kartaa inuu ka soo kabsado faylasha lumay, maxaa yeelay weli waxaa ay u noqon lahaa.
Maskaxda ku hay: Haddii aad files muhiim ah ka drive qalinka lumay, ma badbaadiyo wixii xog ah oo dheeraad ah si wadid aad qalinka si looga fogaado faylasha lumay lagu overwritten.